Andy Robertson oo si weyn u amaanay Eden Hazard kahor kulanka xulalka Belgium iyo Scotland – Gool FM
(Yurub) 06 Sebt 2018. Laacibka kooxda Liverpool ee Andy Robertson aya si weyn u amaanay dhigiisa Chelsea ee Eden Hazard, kahor kulanka ay wada ciyaari doonaan xulalka Belgium iyo Scotland ee UEFA European Championship.
Andy Robertson ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England wuxuu ku sheegay in xidiga kooxda Chelsea uu yahay mid ka mid ah 5 xidig ee ugu wanaagsan aduunka.
“Eden Hazard waa ciyaaryhan aad u wanaagsan, waxaana suuragal ah inuu qeyb ka yahay 5-ta ciyaaryahan ee ugu wanaagsan xiligan aduunka”.
“Mushkilada jirta waxay tahay in kulamo qaar uu yahay mid dagan, laakiin waqtiyo qaar ayuu kulanka kaga soo muuqdaa tayadiisa iyo kartidiisa ciyaareed, waxay imtixaan adag ku noqoneysaa difaac kasta ee doonaya inuu joojiyo”.
“laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan diyaar u noqono kulankan, waa tijaabo aad u wanagsan ciyaartan adag, waa inaan cadaadiska ugu kordhinaa iyaga, sida ay iyagaba sameyn doonaan”.
Mid ka mid ah Halyeeyada kooxda Arsenal oo ka warbixiyay sababta uusan ugu biirin kooxda Real Madrid
“Xabi Alonso wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu adkaa aan la ciyaaro”… Naby Keita